C/raxmaan C/Shakuur oo ka hadlay Weerarkii Al-shabaab ee Ceel-saliini – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay weerarkii Al-shabaab maalmo kahor ay ku qaadeen deegaanka Ceel-saliini ee duleedka Magaalada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qoraal uu soo saaray C/raxmaan C/Shakuur ayaa marka hore waxaa uu tacsi u diray Ciidankii dowladda Federaalka ee ku geeriyooday weerarkii Khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay deegaanka Ceel-saliini.
Waxaa uu sheegay C/raxmaan C/Shakuur in Ciidanka dowladda ee ku sugan Ceel-saliini la dayacay, isla markaana Al-shabaab tiro saddex jeer ah ay weerar xoogan ku qaadeen Ciidanka.
Sababta loo weeraro Ciidanka dowladda ee Ceel-saliini ayuu C/racmaan C/shakuur ku sheegay inay tahay in Ciidamo kale oo lagu bedelo aysan jirin Ciidankaas, isla markaana ciidankii xoogga dalka loo daabulo in lagu qabsado deegaanno nabad ah oo Alshabab laga xoreeyey.
Madaxda dowladda Federaalka ayuu ku eedeeyay in aysan tegi Aaska Ciidankii dowladda ee lagu dilay weerarkii Al-shabaab ee Ceel-saliini ayna qarinayeen ciidanka ay Alshabaab laayeen.
Hoos ka Akhriso Qoraalka uu soo qoray C/raxmaan C/Shakuur.
Allaha u naxariisto ciidankii shuhaddada ahaa ee lagu laayay Ceel Salliini. Waxaan xog ku heynaa in ciidankaas la dayacay, cadawgana loo baylahiyey. Tiro 3 jeer ayaa la soo wareeray, iyadoo ay Alshabaab mar walba ciidan caabboon ku soo weerarayeen xerada. Ma jiro ciidan beddela, ama lagu xoojiyo ciidanka la laayey, sababtuna waa in ciidankii xoogga dalka loo daabulayo in lagu qabsado deegaanno nabad ah oo Alshabab laga xoreeyey.
Madaxda Dowladda Federaalka waxay qarinayaan ciidanka ay Alshabaab laayeen, warbaahintana waxay ku cadaadiyeeen in aysan ka hadal. Waxaa kaloo wax laga naxo ah in aysan Aaskooda tegin, eheladooda u tacsiyeynin, agoontii ay ka tageena booqan, kuwii ka harayna niyadda u dhisin. Dad sidaa u dhaqmaya miyaan ka rumaysan karnaa in ay ciidan dhisayaan, cadawga Alshabab-na jebinayaan.
Si kastaba Al-shabaab warar ay ku qoreen barahood Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheegeen in weerarkii Ceelsaliini ay ku dileen in ka badan 30 Askari oo ka tirsan Ciidanka dowladda , halka Taliska Ciidanka Xoogga uu tilmaamay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhanka shabaab.